यस्तो छ गायिका आस्था राउतको स्पस्टिकरण ! प्रहरी र आस्थाको सिसीटिभी फुटेज बाहिरियो | यस्तो छ गायिका आस्था राउतको स्पस्टिकरण ! प्रहरी र आस्थाको सिसीटिभी फुटेज बाहिरियो – हिपमत
यस्तो छ गायिका आस्था राउतको स्पस्टिकरण ! प्रहरी र आस्थाको सिसीटिभी फुटेज बाहिरियो
बिराटनगर,४ माघ:चर्चित गायिका आस्था राउत र प्रहरीबीच त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको विवाद अहिले निकैनै चर्चाको विषय बनेको छ । राउत झापा जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल चेकजाँचमा प्रहरीले आफूलाई हातपातसहित दुर्व्यवहार गरेको गायिका राउतको आरोप छ । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबकुमार्फत प्रहरीलाई गाली गरेको भन्दै प्रहरीले पनि उक्त विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीले उनलाई ‘तँ’ भनेर बोलाएको, दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनले लाइभ भिडियोमा आक्रोश पोखेकी थिइन् । आस्था भद्रपुर हुदै सिक्किममा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जादै थिइन् । राउतले भनेकी छिन्, ‘अनि त्यो पुलिस डन्ठिनीहरु, त्यो सिपाही प्युसी प्युपीहरु । तिमीहरुको बोल्ने ढंग छैन ?’